Zidane oo ka hadlay barbarihii ay xalay la galeen kooxda Villarreal & kaarkii roosaha uu qaatay Bale – Gool FM
(Spain) 02 Sebt 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagt ee Real Madrid Zinedine Zidane ayaa hadlay kaddib marka uu u dhamaaday kulankii ay xalay barbaraha la galeen Villarreal.
Kooxaha Villarreal iyo Real Madrid ayaa dhinbcaha ku kala qeybsaday Estadio de la Ceramica, kaddib markii ay ku kala bexeen barbaro 2-2 ah.
Zidane ayaa u muuqday mid qanacsan inkastoo aysan guul ka gaarin Villarreal, isla markaana Real Madrid aysan sameynin bandhig fiican, wuxuuna saxaafada u sheegay:
“Waan ilaalin doonaa shucuurta wanaagsan kaddib ciyaartan, sababtoo ah waxaan soo bandhignay kulan fiican, marka laga reebo daqiiqadihii ugu horeeyay ciyaarta”.
“Waxay naga dhaliyeen 2 gool, waxaana ku guuleysanay inaan dib ugu soo laabano natiijada ciyaarta, taasina waa waxa ugu muhiimsan, sidoo kale waxaan sameenay fursado badan si aan goolal u dhalino”.
“Dabcan kuma farxi karno natiijadan, sababta oo ah waxaan xili kasta dooneynaa inaan badino, laakiin hadda waa inaan ka fikirnaa kulankeena soo socda”.
“Kulankan difaaceena ma uusan xooganeyn, waa muhiim inaan ciyaarta ku bilowno si adag, laakiin laba jeer inaan dib ugu soo laabano ciyaarta ayaa ah waxa ugu muhiimsan, maxaayeelay ugu dambeyntii waa muhiim inaadan guuldareysanin”.
Intaas kaddib Zinedine Zidane ayaa ka hadlay kaarka roosaha uu qaatay Gareth Bale dhamaadka ciyaarta, kaddib markii uu dhaliyay goolka labaad ee barbaraha wuxuuna yiri:
“Ma aqaano waxa dhacay, wuxuu qaatay laba kaarka digniinta ah, laakiin waxaan u faraxsanahay isaga dartiis, kaddib markii uu 2 gool ka dhaliyay kulankan, laakiin waa inaan hadda ka fikirnaa waxa soo socda si aan u fiicnaano”.
Real Madrid oo barbaro la soo gashay kooxda Villarreal oo ay booqatay, xili uu Bale qaatay kaarka roosaha…+ SAWIRRO